Koobkii Alfons - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat torsdag 17 april 2008 kl 15.26
Junibacken, waxa ey ku taalaa xaafadda Djurgården ee faras magaalaha Istockholm. Waxaa albaabada loo furey sagaalkii bishii lixaad ee Juun, sannadkii 1996, hoowshiisuna ey ku baxdey dhaqaale gaareya 100 malyuun ee koronka iswiidhishka ee waagaasi.
Maalintii Khamiista taariikhduna aheyd tobankii Apriil ee 2008, waxaa goobtaasi ka dhacdey xaflad leysku gudoonsiinayey bilad sharaf loogu magac darey ”Koobkii Alfons” Alfons -bokalen. Middaasina uu ku guuleystey indha-sarcaadiyaha Tobbe Trollkarl.
Biladdan ayaa markii ugu horreysey la bixiyey sannadkii 1992-kii middaasina oo ey aasaastey qoraayadda iswiidhishka ee caanka ah, magaceedana la yiraahdo Gunilla Bergström iyo shirkadda buugagta ee Rabén & Sjögren, iyadoona looga gol lahaa sidii abaalmarin loogu guddonsiin lahaa, islamarkaana loogu dhiiri gelin lahaa shakhsiyaadka gacanta weyn ka geysta horumarinta dhaqanka iyo suugaanta dhallaanka.
Haddaba magaca Alfons ee abaalmarintan loogu magac darey ayaa ka soo jeeda buugag labaatammeeyo kor u dhaafaya jilihiisa, eyna qortey markii ugu horreysey sannadkii 1972, qoraayadda la yiraahdo Gunilla Bergström.
Alfona Åberg waa wiil yar ee la nool aabbihii.
Alfons iyo aabbihii aad ayey u kala duwan yihiin. Odeygu waa maskiin inta badan, hase yeeshee aan marar badan ka warqabin waxyaabaha uu inankiisu ku kaco ama ku mashquulsan yahey. Alfons isaguba waa maskiin, inkastuu mararka qaarkood yahey inan leh fudeyd rabsho wata.
Buugagta Alfons Åberg ee labaatameeyada kor u dhaafaya ayaa ah kuwo xiiso iyo shaactiraba leh, iyadoona qaarkood ey ka hadlayaan arrimmo nolosha iyo korriimada ku wajahan.
Gunilla waa 66 jir, muddo iminka ey ka soo wareegtey 35 sannadood ayaan ku howlanaa qoridda sheekooyinka caruurta. Suugaanteedana waxaa ugu caansan kuwa ey ugu magac dartey Alfons Åberg, marka ey ku qoran yihiin luuqadda Iswiidhishka, hase yeeshee waxaa loogu yeeraa magacyo kala duwan, sida ey Gunilla Bergström, noo sheegtey Bergström, qoraayaddii buugagtaa.
Maahmaahda iswiidhishka ee oraneysa ”kärt barn har många namn”, ilmaha la jecelyahey, waxaa loogu yeeraa magacyo badan”, sida Gunilla-ba sheegtey in Alfons Åberg kolka lagu tarjumey buugagtiisa afaf kala duwan ee soddomeeyo gaareya qaarkood uu yeeshey magacyo kala duwan.
Waxaa sheekooyinka qoraayadda Gunilla Bergström, lagu tarjumey luuqado gaareya soddon, kuwaasina oo ey ka mid tahey luuqadda Soomaaliga. Goorta la tarjumey iyo waxa magacan Guuleed loogu bixiyey Alfons ayaan ka warreysaney Bashiir, kana mid ah mulkiileyaasha shirkad soo saarta buugagta. Bashiir Ismaaciil Cismaan, wuxuu ka mid yahey mulkiileyaasha shirkad soo saarta buugagta. Waxeyna aheyd shirkaddii buugagta ugu horreysey ee soo saarta tarjun buugagta Alfons.